Shiinaha warshad biyaha aasaasiga ah warqad xabagta warshad xabagta iyo alaab-qeybiyeyaasha | DESAY
Muuqaalka: Caano cad cad emulsion
Waxyaabaha adag: ≥25%
Nafwaayay: 50 ~ 100s (dahaarka 4 koob, 25 ℃)
Waqtiga lagu baabi'inayo faybarka warqadda: Minute 1 daqiiqo
Xabagta tube warqad
Soo bandhigida alaabta.
Waxaa laga sameeyaa aalkolada polyvinyl, kaolin iyo walxaha yaryar.
1: Adhesion-ka bilowga ah ee adag, waqti dhakhso leh oo daaweyn ah （waqti ay xabagta ku qalasho). 3-5 daqiiqo gudahood, qotomintu waxay noqon kartaa mid xoog ku filan oo jabisa marka xoog loo jeexo. ka dib markaad ku darto xabagta waxay ka dhigi kartaa tuubada xaashida mid adag, oo iska caabi cadaadiska sare.
2: Maxaa yeelay alaabta ceyriinka ah waxaa ka mid ah maadada Kaolin oo qiimaheedu jaban yahay oo kaliya 260 USD / ton, soosaarayaasha tuubada warqada ayaa leh baahi weyn.
Muuqaal Caano khafiif ah oo huruud ah
Waqtiga daaweynta: 24 saacadood
Nolosha shelf 6 bilood
Tan afraad, baaxadda arjiga
1: xabagta noocan ah waxaa loo isticmaali karaa quusin ama buufin, waxaa loo isticmaali karaa habka wax soo saarka ee tuubbada dunta, tuubada pagoda, tuubada kiimikada kiimikada, tuubada cajalad lagu xirayo, warqad ilaalinta geeska, iwm.
2: Haddii dhumucda tuubbada xaashida ahi ay tahay 3-8 mm, waxaa lagu daaweyn karaa heerkulka qolka. Hadday kor ka tahay 12 mm waxay u baahan tahay foorno si loo dedejiyo daaweynta.
3: xabagta noocan ah waxaa loo isticmaali karaa khadka sooska dheereeya ee tuubada pagoda.
1. Xabagta waxtarka leh ee waraaqda waxtarka badan leh waa badeecad biyo ku saleysan, oo ammaan u ah isticmaalkeeda oo aan keenin wasakheynta deegaanka.
2. Qoyaanka si dhakhso leh ayuu uumi baxayaa, wax soo saar ka dib soosaarka tuubada warqadu waxay leedahay hoos u dhac yar, cillad yar iyo wax soo saar sareeya.
3. Waxyaabaha adag ee adag waa weyn yihiin, taas oo si weyn u yareyneysa waqtiga qalajinta waxayna gaabinaysaa wareegga wax soo saarka;
4. Waqti gaaban oo dhejis ah, oo ku habboon bilawga xargaha xawaare kala duwan, sameysma hal mar, hagaajinta waxtarka iyo yaraynta xoogga shaqaalaha;
5. Awoodda isku xidhka sare: Awoodda cadaadiska, adkeysiga biyaha iyo dhaxan iska caabinta tuubada warqadda ah ee ay soo saarto xabagtaani ayaa ka sarreeya kuwa ay soo saaraan noocyada kale ee caagga ah!
6. Cagaarka iyo ilaalinta deegaanka: Isticmaalka muddada-dheer ee xabagta weelka warqadda ahi waxyeello uma leh jidhka bini-aadamka, wax soo saarka wax soo saarkuna wuxuu waafaqsan yahay heerarka wax soo saar ee shirkadda;
7. Adkaysi adag oo qabow, dheecaan wanaagsan oo 0 ℃ ah, malahan jiheyn.
8. Xasiloonida kaydinta wanaagsan. Ku keydso heerkulka qolka in ka badan 3 bilood iyada oo aan loo baahnayn ama ka sii darin.
1. Waxay ku habboon tahay noocyada kala duwan ee tuubbada xaashiyaha iyo khadadka wax soo saarka tuubbada, oo loo isticmaalo samaynta tuubooyin waraaqo ah, diirkadaha waraaqaha ah, tuubooyinka waraaqaha, daasadaha waraaqaha ah ee loo isticmaalo faybar kiimiko ah, samaynta waraaqaha, caagagga, baakadaha, dharka, daabacaadda iyo warshadaha midabaynta;
2. Ku habboon noocyada kala duwan ee khadadka wax soo saarka ilaalinta geeska warqadda;
3. Waxay ku habboon tahay sameynta waardiyeyaal waraaqo kala duwan ah, diirka warqadaha malabyada, saxanadaha warqadda, iwm.
4. Waxay ku habboon tahay khadadka wax soo saarka kartoonka iyo kartoonka heerka sare ah;
5. Ku habboon buugaag kala duwan iyo otomaatiga pagoda otomaatigga mashiinka duubista;
6, oo lagu qasi karo biyo ayaa loo isticmaali karaa qulqulka
Wax soo saarka biyaha ku saleysan waa aamin in la isticmaalo mana sababaan wasakheynta deegaanka
Si deg deg ah uga faa'iideysiga biyaha, soosaarida heerka yareynta tuubada xaashiyaha ayaa yar, kala duwanaansho yar, soo saar sare
Waxyaabo adag oo waaweyn, oo si weyn u yareeya wakhtiga qalajinta, ayaa gaagaaba wareegga wax soo saarka
Iska caabin adag oo qabow, dheecaan wanaagsan oo ku jira xaalad 0, xaalad la'aan
Xasiloonida kaydinta wanaagsan, keydinta heerkulka qolka in ka badan 3 bilood, ma laha xayiraad, ma sii xumaan karto
Awoodda isku xidhka sare: tuubada xaashida ah ee ay soo saarto xabagtaani waxay leedahay awood isku-dul-saarid ah, biyo-iska caabin iyo iska caabbinta dhaxan marka loo eego ta ay soo saaraan noocyada kale ee xabagta
Ku habboon noocyada kala duwan ee tuubbada waraaqda, khadka wax soo saarka tuubbada xaashiyaha, oo loo isticmaalo soo saarida faybar kiimiko ah, warqad, caag, baako, dhar, daabacaadda iyo warshadaha midabaynta sida tuubada waraaqaha, xudunta warqadda, tuubada xaashiyaha, waraaqda.
Waxay ku habboon tahay sameynta dhammaan noocyada guddiga ilaalinta warqadaha, xudunta warqadda malabyada, saxaaradda xaashiyaha iyo khadadka kale ee wax soo saarka.
Hore: Universal Glue / Super SBS All-purpose General Adhesive Glue
Xiga: S168 Silicone Sealant Cimilo adkaysi u leh Cimilada Dhismaha Cimilada u adkaysta derbiyada dibedda, saqafyada, albaabbada iyo daaqadaha